AMBOHIMANARINA Tra-tehaka ireo roa vavy mpivarotra rongony antsinjarany
Mpaninjara rongony roa vavy no voasambotry ny polisy miasa ao Ilanivato ny alahady 28 aprily teo teny amin’iny faritra Ambohimanarina iny noho ny fivarotana zava-mahadomelina.
Nanomboka ny zoma 26 aprily no naharay vaovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny polisy miasa eny Ilanivato mikasika ny fisiana vehivavy mivarotra rongony mipetraka eny amin’ny faritra Ankazomanga eny. Araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny polisy, tratran’ny vela-pandrika teny akaikin’ny Galaxy Andraharo ny vehivavy iray ka noraisim-potsiny teo am-pivarotana rongony ny alahady 28 aprily. Izy indray avy eo no nanoro ny vehivavy namany iray hafa. Ity farany dia nosamborina teny Tsaramasay Ankazomanga ny androtr’io ihany. Mbola nahatrarana fonosana rongony lehibe milanja 300 grama sy 6 fonosana kely ihany koa tany amin’izy ireo nandritra ny fisavana. Fantatra fa eny amin’iny faritra Ambohimanarina iny ihany no akany ny entana. Vidiany 60.000Ariary ny lasaka kely iray ary amidy antsinjarany avy eo. Natolotra ny fampanoavana omaly alatsinainy 29 aprily ny raharaha. Efa maro ihany ireo tratra teny amin’ny faritra Ambohimanarina tamin’ity resaka trafika ity, saingy tovozin-tsy ritra noho ny tsy fahatrarana ny mpamatsy sy ny atidoha mpikotrika izany. Anisan’ny mampirongatra ny tsy fandriampahalemana ity varoboba rongony mibanaka ity.